थाहा खबर: दशैंमा मासु कसरी खाने, कति खाने?
काठमाडौं : मासु खान दशैं कुर्नै नपर्ने भए पनि दशैंलाई टन्‍न मासु खाने पर्वको रूपमा लिइन्छ। अहिले पनि दशैं भन्नेबित्तिकै घरमा खसी काट्नैपर्ने, मासु खानैपर्ने मान्यता छ।
तर, दशैंमा खानपानमा ध्यान नदिँदा हामीलाई जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने गर्छन्। जसले गर्दा दशैंमा रातो टीका र जमराका साथै खानपानका (मासुका परिकार) लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
मासुका परिकार धेरै खाने प्रचलन रहेको दशैंमा कस्ता मानिसले कति मासु खाने भन्ने कुरा हेक्का नराख्दा खानपान (मासुका परिकार)ले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर समेत गर्छ। त्यसैले दशैंमा विशेषतः मासुका परिकार खाँदा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। शरीरको तौल, उमेर र अन्य स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित तरिकाले मासुका परिकार खाने गर्दा स्वास्थ्यमा असर गर्दैन।
कुन उमेरकाले कति खाने?
मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ। २५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखि ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ। थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ। जसले गर्दा एक जवान मानिसले एक दिनमा २५० ग्रामसम्म मासु खान राम्रो हुन्छ।
धेरै जनाले पर्व भनेर आवश्यकताभन्दा बढी मासुको परिकार खाने बानी छ। यो स्वास्थ्यका लागि एकदमै घातक हो। त्यसैले दशैंमा मासु खाँदा आफ्नो शरीरको तौलअनुसार खानु राम्रो हुन्छ।
कस्तो मासु खाने?
यस्तै सकेसम्म सबैले बोसोरहित मासु खाएको राम्रो हुन्छ। अझै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौलामा समस्या, कोलेस्ट्रेरोल बढी भएका व्यक्तिले बोसो नभएका मासु सकभर उसिनेर खानु राम्रो हुन्छ।
यसका साथै अझ उसिनेको मासुमा हल्का जिराको धुलो र कागती राखेर खानु उत्तम मानिन्छ। सकेसम्म रातो मासुभन्दा सेतो मासु, माछा खाएको राम्रो हुन्छ।
मासु खाएपछि शरीरलाई सक्रिय बनाऊँ
मासु खाएपछि हलचल वा व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसो त शरीरका लागि नियमित रूपमा ४५ मिनेट जति हिँड्नु राम्रो हुन्छ। मासु खाएका वेला पनि सो प्रक्रियालाई थप्न सकिन्छ
ग्यास्टिकले नसताओस् भन्नका लागि सकभर उसिनेको वा झोलयुक्त मासु खान लाभदायी हुन्छ।
मासु खाइसकेपछि असहज महसुस भएमा कागती पानी वा ज्वानो पानी खान सकिन्छ। यसले असहजता हटाउन मद्दत गर्छ। सकेसम्म बेलुकीको समयमा मासु कम खाएको राम्रो हुन्छ।
धूमपान र पेय पदार्थ कम सेवन
दशैंमा माछामासुका साथै धूमपान तथा पेय पदार्थको प्रयोग धेरै हुन्छ। वर्ष दिनमा आउने चाड भन्दै साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने बहानामा माछामासुसँगै पेय पदार्थको अत्यधिक प्रयोग हुने भएकाले रमाइलो गर्ने बहानामा माछा मासुसँगै खाइने पेय पदार्थले हानि गर्छ।
चाडवाडको बहानामा खाइने यस्ता पेय पदार्थ र धूमपानले मुटु र फोक्सोलाई हानि गर्छ।
चिल्लो, पोलेको, भुटेको मासु कम खाने
दशैंमा धेरै चिल्लो र भुटेका खानेकुराले रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीलाई असर गर्छ। धेरै भुटेका खानेकुरा खाँदा भुट्न प्रयोग गरिएको तेल, घ्यू धेरै बेर तताउँदा त्यसमा विषालु पदार्थ जम्छ, जसले मुटुलाई निकै हानि पुर्‍याउँछ।
अर्को कुरा दशैंमा पकाएको माछामासु धेरै दिनसम्म खानु पनि राम्रो हुँदैन। पकाएको मासु लामो समयसम्म राख्दा दूषित हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ।
औषधि खान नछाडौँ
यस्तै नियमित रूपमा खादै आएका औषधि पनि खान छाड्न हुँदैन। धेरैले चाडवाडका वेला रमाइलोमा भूल्ने हुँदा नियमित रूपमा खाँदै आएका औषधि खान छाड्ने बानी छ तर यस्तो गर्नु हुँदैन। यस्तै निममित रूपमा शारीरिक व्यायम समेत गर्न छुटाउन हुँदैन।
भरतपुर अस्पताल चितवनमा कार्यरत फिजिसियन डा. गोविन्द कँडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित